आईपीएल फाइनल: ४ पटक च्याम्पियन मुम्बई र पहिलो पटक फाइनल पुगेको दिल्ली कसले जित्ला ? - Gandak News
पोखराका ३४ सहित गण्डकीमा थप ९९ जनामा कोरोना पुष्टि
आईपीएल फाइनल: ४ पटक च्याम्पियन मुम्बई र पहिलो पटक फाइनल पुगेको दिल्ली कसले जित्ला ?
गण्डक न्यूज द्वारा २५ कार्तिक २०७७, मंगलवार १२:३७ मा प्रकाशित 0
इन्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) क्रिकेटको उपाधिका लागि आज मंगलबार दिल्ली क्यापिटल्स र मुम्बई इण्डियन्सबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । यूएईको दुबई अन्तर्राष्ट्रिय मैदानमा खेल बेलुका पौने ८ बजे सुरु हुनेछ।
मुम्बई साविक विजेता टिम हो भने दिल्ली पहिलो पटक आईपीएलको फाइनलमा पुगेको हो। रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रने मुम्बई आईपीएलकै सर्वाधिक सफल टिम हो । मुम्बईले सर्वाधिक ४ पटक आईपीएल उपाधि जितेको छ । दुबईमा दिल्लीलाई हराएर मुम्बई पाँचौ उपाधि आफ्नो बनाउन चाहन्छ ।
तर, श्रेयस अयरको कप्तानीमा मैदान उत्रने दिल्ली भने पहिलो पटक फाइनल खेल्दैछ । त्यसैले दिल्ली मुम्बईलाई हराएर इतिहास रच्दै पहिलो उपाधि जित्न चाहन्छ । बलियो मुम्बईविरुद्ध जित निकाल्न दिल्लीलाई सहज भने छैन । तर, दिल्ली अघिल्ला तीन खेलमा व्यहोरेको हारको बदला लिन चाहन्छ ।
लिग चरणको पहिलो खेल मुम्बईले दिल्लीमाथि ५ र दोस्रो खेल ९ विकेटको जित निकालेको थियो । यस्तै, पहिलो क्वालिफायरमा दिल्लीलाई ५७ रनले हराएर मुम्बई फाइनलमा पुगेको हो । पहिलो क्वालिफायरमा हार व्यहोरे पनि दिल्लीले दोस्रो क्वालिफायरमा जित निकाल्दै पुनस् मुम्बईसँगको भेट पक्का गरेको हो ।